अष्ट्रेलियामा सिभिल इञ्जिनियरिङ पढ्न जाने सोचमा हुनुहुन्छ ? यस्तो छ कोर्स र पढ्नको लागि लाग्ने शुल्क - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
अष्ट्रेलियामा सिभिल इञ्जिनियरिङ पढ्न जाने सोचमा हुनुहुन्छ ? यस्तो छ कोर्स र पढ्नको लागि लाग्ने शुल्क
प्रकाशित मिति: ८ श्रावण २०७५, मंगलवार
अष्ट्रेलिया । नेपालमा + २ सकाएर अष्ट्रेलियामा पढ्न आउने विद्यार्थीहरुको संख्या बढिरहेको छ। अष्ट्रेलियामा पढ्न आउने धेरै विद्यार्थीहरुको रोजाईमा पर्ने विषय हो इञ्जिनियरिङ्ग । इञ्जिनियरिङ्ग भित्र पनि यहाँ सिभिल इञ्जिनियरिङ्ग कोर्सको बारेमा चर्चा गरिएको छ ।
मोनाश युनिभर्सिटीमा मास्टर्स अफ एडभान्स्ड सिभिल इञ्जिनियरिङ्ग पढाई हुन्छ जस अन्तर्गत, ट्रान्सपोर्टेसन, वाटर र इन्फ्रास्टक्चर मध्येमा एक रोज्न सकिन्छ । यसमा भर्ना हुनको लागी इञ्जिनियरिङ्गमा स्नातक गरेको हुनुपर्छ । जसमा ७५ % अंक वा कामको अनुभव सहित ६५% ल्याएको हुनुपर्छ ।
यो दुई वर्षे र १ वर्षे कोर्स रहेको छ । कोर्स शुल्क ३८,९०० डलर लाग्छ ।
द युनिभर्सिटी अफ क्विन्सल्याण्डमा मास्टर्स अफ इन्तिग्रेटेड वाटर म्यानेजमेन्ट पढाई हुन्छ जुन डेढ वर्षे फुल टाइम कोर्स हो । यसको शुल्क ३६,६८८ डलर रहेको छ । यसमा आगामी वर्षको फेब्रुअरी महिना देखि नयाँ भर्ना लिईन्छ । यसमा भर्ना हुनको लागि वाटर म्यानेजमेन्टमा स्नातक गरेको र दुई वर्षे कामको अनुभव हुनुपर्छ ।
युनिभर्सिटी अफ अडेलेडमा मास्टर्स अफ सिभिल इञ्जिनियरिङ्ग अन्तर्गत सिभिल एण्ड इन्भायेरोमेन्टल र सिभिल एण्ड स्ट्रक्चरल गरि दुई कोर्स रहेका छन् । यो दुई वर्षको फुल टाइम कोर्स हो जसको शुल्क ४०,००० डलर रहेको छ । यसको लागि सम्बन्धित विषयमा स्नातक गरेको हुनुपर्छ ।
द युनिभर्सिटी अफ सिड्नीमा मास्टर्स अफ इञ्जिनियरिङ्ग (१.५ वर्षे कोर्स) , मास्टर्स अफ प्रोफेसनल इञ्जिनियरिङ्ग (३ वर्षे कोर्स), मास्टर्स अफ अर्बान डिजाइन(१.५ वर्षे कोर्स) , मास्टर्स अफ अर्बानिज्म (२ वर्षे कोर्स) गरि चार वटा कोर्स रहेका छन्। इञ्जिनियरिङ्ग र प्रोफेसनल इञ्जिनियरिङ्गको कोर्स शुल्क ४३,००० डलर र अर्बान कोर्सको शुल्क ३०,५०० डलर रहेको छ ।
युनिभर्सिटी अफ टेक्नोलोजी सिड्नीमा मास्टर्स अफ इञ्जिनियरिङ्ग इन सिभिल एण्ड इन्भायेरोमेन्टल र मास्टर्स अफ इञ्जिनियरिङ्ग इन सिभिल इञ्जिनियरिङ्ग गरि दुई कोर्स रहेका छन् । दुवै १ वर्षे फुल टाइम कोर्स हुन् र कोर्स शुल्क ३३,४७० डलर लाग्छ ।
अष्ट्रेलिया । अष्ट्रेलियाका समाचार माध्यमका अनुसार अष्ट्रेलिया सरकारले अागामी वर्ष दिने स्थायी आवासिय भिजा […]
अष्ट्रेलिया । अष्ट्रेलियाको राज्य सरकारहरुले नयाँ सवारी नियममा कडाई गरेको छ । सेप्टेम्वर १७ देखि लागू गरेको […]